Cusboonaysiinta la sii daayay si loo saxo u nuglaanta WiFi ee KRACK ee AirPorts | Waxaan ka socdaa mac
Waana in dhammaan dadka guriga ku leh Apple Wi-Fi saldhig u ahaa u nuglaantaas oo horay loogu saxay noocyadii hore ee alaabooyinka Apple laakiin laga dhaafay saldhigyada WiFi ee shirkadda. Xaaladdan oo kale nooca cusub ayaa gaaraya dhammaan AirPorts, oo ay ku jiraan AirPort Express, AirPort Extreme, iyo Time Capsule.
Nooca cusub ee 7.7.9 ayaa loo heli karaa qalabka taageera shabakadaha 802.11ac, halka cusbooneysiinta 7.6.9 loo heli karo saldhigyada saldhigyada ee 802.11n. Sideedaba midkoodna saldhigyada WiFi ee Apple lagama tagi doono iyada oo aan la cusbooneysiin saxin u nuglaanta taas oo u oggolaanaysa dhinacyada saddexaad inay wax ku dhex maraan daciifnimada borotokoolka WPA2.
Markay muuqatay u nuglaanta shabakadaha WPA2, warar badan ayaa ka digay in Apple joojinta AirPods dartiis, fashilka la ogaadey dhowr toddobaad ka hor uu noqon karo mid aan la xallin, laakiin noocaan cusub, qof kasta oo leh saldhig AirPort ah ayaa dhibaatada lagu xallin doonaa. Sida iska cad cusbooneysiin la'aan saldhigyada AirPort sidoo kale waa la isticmaali karaa, laakiin waa loo soo bandhigay dayacanka oo la hagaajiyay horey qalabka kale ee wiilasha Cupertino.
Cusbooneysiinta qalabka cusub ee ay sii deysay Apple ayaa lagu rakibi karaa iyadoo la adeegsanayo barnaamijka AirPort Utility ee iOS ama MacOS wixii hada ka dambeeyana waa suurtagal in la soo dejiyo oo la rakibo noocyada cusub. Si kastaba xaalku ha ahaade, kani waa cusbooneysiin lagula taliyay qof walba waana taas dhibaatada amniga waxay ahayd mid muhiim ahwaxaan jeclahay inaan ka boodo shirkadda cusub, markaa waxaan kugula talineynaa inaad sida ugu dhakhsaha badan u cusbooneysiiso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Cusboonaysiinta la sii daayay si loo saxo u nuglaanta WiFi ee KRACK ee AirPorts